Overcast inotibvumidza kugovera odhiyo uye vhidhiyo clip mushure mekupedzisira kwayo kugadzirisa | IPhone nhau
Overcast inotibvumidza kugovana odhiyo uye vhidhiyo clip mushure mekupedzisira kwavo kugadzirisa
MuApp Store tinokwanisa kuwana huwandu hukuru hwezvishandiso zvekuteerera podcast kwatinofanira kuwedzera Spotify, yekushambadzira mimhanzi sevhisi iyo mumakore apfuura iri kubheja zvakanyanya kuoma pama podcast, maPodcast ane yavo yega chikamu mukati mekushandisa, sarudzo ingangoita nekukurumidza kana gare gare zvakare kuwanikwa kuburikidza neApple Music.
UImwe yeakanakisa maficha ekuteerera podcasts, zvirinani ndizvo zvandave ndichishandisa kwemakore mana apfuura iOvercast, chishandiso chakagadzirwa naMarco Arment, musiki weFlipboard uye mumwe wevagadziri ane huremu hwakawanda mukati memharaunda yevagadziri veApple. Mushure mekugadziriswa kwayo kwekupedzisira, inotibvumidza kugovana zvese odhiyo nemavhidhiyo clip.
Nekuda kwesarudzo iyi, tinogona kugovana nemunhu chero upi zvake, iyo vhidhiyo kana odhiyo clip yatinoda nenzira yakapusa uye pasina kutumira maLinks kuti iko kurodha pasi uye ivo vagone kuzviteerera, sezvo zvakananga kuudza odhiyo kana vhidhiyo faira, Pasina kumanikidza isu kubaya pane iyi link.
Kugona kugovera odhiyo kana vhidhiyo clip, isu tinongofanirwa kutanga kutamba iyo chaiyo podcast. Kana tikazviwana tiri panguva chaiyo yatiri kuda kugovana, isu tinongofanirwa kudaro tinya pane Bhatani bhatani, iri mukona yekumusoro kurudyi uye sarudza Goverana Clip.
Tevere, tinofanira sarudza mavambo uye magumo eodhiyo kana vhidhiyo clip iyo yatinoda kugovana. Gare gare isu tinofanirwa kusarudza fomati, kana iri vhidhiyo (kana iri odhiyo haina basa). Chekupedzisira, tinya pane Inotevera, kuti utarise kana isu takanyatsosarudza iyo clip iyo yatinoda kugovera uye tinya paGovana zvakare.
Tevere, isu tinongofanirwa kudaro sarudza chikuva chatinoda kugovana odhiyo kana vhidhiyo clip izvo zvatakasika kuburikidza nekushandisa. Kana iwe uchida kunzwa nhau dzichangoburwa kubva kuApple vhiki yega yega kuburikidza nepodcast, kubva kuActualidad iPhone isu tinoisa zvaunogona podcast Yese Apple.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Overcast inotibvumidza kugovana odhiyo uye vhidhiyo clip mushure mekupedzisira kwavo kugadzirisa
Iyi pfungwa inoshamisa yeIOS 13 inoratidza kugona kunowirirana neMicrosoft Mouse
Ziva mhedzisiro yeGeneral Sarudzo dzeSpain kubva kune yako iPhone